Anyị na-enyocha filaments kachasị mma nke ihe Smart 3D | Akụrụngwa n'efu
Tony nke Mkpụrụ osisi | | Nkọwa 3D
Oge a anyị na-ewetara gị edemede ọzọ site nyocha filament nke anyi tinyeworo nka na onye okacha amara n’ime ule ya na ngwa oru sitere n’aka onye na emeputa ya Ihe Akụrụngwa 3D
Smartfil bụ aha e nyere dum ụdị filaments si Spanish emeputa Smart Materials 3D dabere na Jaen. Inwe ihe karịrị iri na abụọ dị iche iche, nke anyị ga-enyocha ngwaahịa gị BOUN, GLACE, PLA 3D850 na EP na anyị ga-akọwa n'uju nkọwa niile nke ojiji.
La emeputa website nwere a ọcha na kensinammuo imewe ma ọ dịịrị anyị mfe ịchọta ngwaahịa niile. Na ihe ọ bụla anyị na-ahụ a njikọ na ndu / katalọgụ na PDF 38 peeji nke ha na ewetara anyi ihe nile na ọnọdụ okpomọkụ obibi akwụkwọ. Agbanyeghị, anyị enwebeghị ike ịchọta profaịlụ mbipụta maka ndị na-egbu ihe ma ọ bụ karịa teknụzụ ndị ọzọ na ihe ndị ahụ.
Na ohere ịzụta maka ihe ọ bụla anyị na-atụ uche ebipụta okpomọkụ, okpomọkụ bed bed, na a okpokoro atụ dị na njupụta, mgbanwe, mmetụta nkwụsi ike na akụkụ ndị yiri ya. Karịa ụkpụrụ a kapịrị ọnụ nke ndị injinia ole na ole nwere ike ịghọta, dịka ọmụmaatụ tebụl akara nke 1 - 5 na-atụle ihe ahọrọ na ihe PLA ma ọ bụ ABS nke ọtụtụ ndị mere nwere ahụmịhe gara aga. Agbanyeghị, site na ịkpọtụrụ anyị site na mpempe akwụkwọ na weebụsaịtị ahụ n'onwe ha, ha ga-enye anyị ozi anyị chọrọ, gụnyere ndụmọdụ gbasara mbipụta otu mpempe.
para nyocha a anyị ejirila ANET A2 PLUS na ngwa nbipute ọzọ. N'agbanyeghị ịbụ igwe ọnụ ala (na ọnụahịa dị n'okpuru 200 if ma ọ bụrụ na anyị si na China zụta ya) ma ghara ị nweta nsonaazụ nke ọkwa zuru oke, ọ zuru oke maka ọtụtụ ihe dị na ahịa. O nweghi njirimara njiri mara nke oru; ike ibipute na- 100 mm / s, o nwere ụdị extruder dị iche iche, enwere ike iwe iwe ọkụ ruo 260 Celsius C, ọ nwere ike ibipụta na a 100 micron mkpebi, tufuo ọkụ ọkụ ma nwee otu nnukwu ebe obibi akwụkwọ (220 * 220 * 270mm).
Anyị ejirila obi anyị mee mpempe akwụkwọ ahụ dị obere, anyị ejirila nkwado ma anyị ejighi oyi akwa. N'ụzọ dị otú a, site na ibipụta ole na ole, anyị nwere ike igosi gị otu ihe si akpa agwa na ọnọdụ dị oke egwu.
3 Smartfil PLA 3D850 uzo agba filament
5 Mmechi na 3D Smart ihe Filaments
Ihe a nwere ụfọdụ arụ ọrụ igwe dị ka polypropylene, ekele gị ike mgbanwe Ọ bụ ike ịzụlite ọkara isiike iberibe na-eguzogide ọgwụ na mmetụta, anyị nwere ike inweta iberibe na ahụkebe imecha na na a nnọọ obi ụtọ nro aka na bụ ihe yiri nke a ike roba karịa a plastic.
Ọ bụ ihe dị mfe iji bipụta kemgbe ọ dịghị mkpa iji isi ihe na-ekpo ọkụ, ọ naghị ata ahụhụ ma ọ bụ agha n'oge obibi akwụkwọ n'agbanyeghị oke akụkụ. N'ihi na irube isi nke na-ewepụta ihe a na iberibe nke nwere ebe obibi akwụkwọ sara mbara nke ukwuu, ọ ga-adị mkpa iwepu ya site na itinye mmiri na isi. Nke a na-acha ọcha na nke hue yiri a ọdụ. N'ime eriri igwe ha nwere agbanwe agbanwe agbanwe mana anyị agaghị enwe nsogbu nsogbu na extruder.
Mbipụta n'etiti 200 na 220º C wee jiri nwayọ nwayọ N'ihi nke a, anyị na-akwado onye na-akwado oyi akwa n'oge niile, ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ihe dị mkpa na ngalaba kachasị mpekere nke ibe anyị.
Iberibe dị iche iche ike mgbanwe na mgbe nrụgide weghachite ọdịdị mbụ ya, zuru oke maka akụkụ ndị na-aghaghị iguzogide mmetụta. Ihe nkwado na-agbaso nke ọma na akụkụ ahụ na ihe na-acha ọcha na ebe ewepụrụ ha.
Site n'iji ntinye dị ala nke ukwuu ma ghara iji ihe mkpuchi oyi akwa, ọ na-ata ahụhụ mgbe ọ na-adọta àkwà mmiri. A na-atụ aro ka ị gbakwunye akwa ndị ọzọ na laminator iji mechaa ibe ahụ na-ahapụghị oghere ọ bụla.
Ihe a Emere ya na polymer thermoplastic ihe eji eme ihe kariri ABS na PLA, nguzogide mmetụta dị mma na mgbanwe dị elu. Enweghị warping otú nnukwu akụkụ nwere ike arụpụtara na magburu onwe ya mma. Ma ihe kachasị ịtụnanya, ị nwere ike itinye a chemical polishing na mmanya n'ụzọ dị otú ahụ na iberibe na elu nghọta na a kpamkpam ezigbo imecha nwere ike arụpụtara. A na-eji ire ụtọ mmanya na-eme ka ire ụtọ a, yiri smoothing nke ABS na acetone. A na-ewepụ ihe nkwado n'ụzọ dị mfe na-ahapụghị akara ọ bụla na ihe onwunwe cools na a nnọọ ezigbo ọsọ otú anyị ga-enweta ezigbo mma na-enweghị iji oyi akwa ofufe. Ya obibi akwụkwọ yiri nnọọ PLA.
The eriri igwe filament bụ kpam kpam uzo ma dị ka na niile uzo filaments, okpomọkụ na eruba ọdịiche n'oge ebi akwụkwọ na-akpata akụkụ ndị e biri ebi dị translucent. Nsonaazụ kachasị mma mgbe a na-ebipụta otu akwa ma ọ bụ jiri nhọrọ nke ụfọdụ laminators tinye, ọnọdụ gbara gburugburu ma ọ bụ ọnọdụ iko. Agbanyeghị, mgbe ị na-enweta iberibe translucent, ọ na-esiri ike ijide ngwụcha nke ibe ahụ na foto ma ọ bụ jiri anya gba ọtọ.
Usoro nke kemịcha kemịkalụ Anyị nwere ike ime ya n'ụzọ dị iche iche dabere na njirimara nke mpempe akwụkwọ e biri ebi; Site na itinye aka na ahịhịa na mpempe mpempe akwụkwọ ahụ, na-edobe mpempe akwụkwọ ahụ dum na mmanya vapo ma ọ bụ ụzọ kachasị ike site na itinye ihe ọ alcoholụ alcoholụ na-aba n'anya. Methodzọ ọ bụla ga-enweta nsonaazụ dị iche, nke na-emekwu ihe ike ka mma mma ma ọ bụ obere nkọwa.
Mpempe aka ekpe ejirila mmanya na-eji mmanya na-eme ka ọ dị na brush. N’agbanyeghi n’ile anya ya, o siri ike ịghọta na ihicha mpempe ahụ, eziokwu ahụ na ọ na-enwu karịa na-egosi na elu ya dị nro karịa.
Smartfil PLA 3D850 uzo agba filament
Ọ bụ filament emere PLA nke emeputara nke oma nke 3D nke sitere na Nature Works, obu ihe eji emebi emebi na ya na dị nnọọ ala shrinkage. Ezigbo maka Mbipụta nke ahụ chọrọ mkpebi dị elu ebe nkọwa di obere. Isi uru ya bụ kristalization ngwa ngwa, nke na-enye ohere ka akụkụ dị mgbagwoju anya mee na-enweghị nkwado, yana inwe ike ibipụta na nnukwu ọsọ. Filamentị a achọghị akwa dị ọkụ ma nwee Njirimara dị elu na nke okpomọkụ karịa ọkọlọtọ PLA. Ihe a na-ebipụta n'ụzọ zuru oke na ogo 200 ma dị jụụ ngwa ngwa n'ihi ya ọ dịghị mkpa maka onye na-akwado oyi akwa ma e wezụga n'akụkụ ndị dị warara. Anyị na-ahapụ gị foto ole na ole nke ihe ahụ
Ihe a se Mbipụta na 200 ºC, adịghị ata ahụhụ ma dịkwa mfe igwe iji melite elu imecha. Njirimara ndị a yana eziokwu bụ na o siri ike karịa PLA na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma maka ndị raara onwe ha nye nka, ụlọ, ngalaba deontological, ma ọ bụrụ na ha eme ụdị, mweghachi, n imomi ihe osise, wdg. na Enwere ike iji ụdị agba ọ bụla tee ya ma mechaa magburu onwe ya.
Ihe mgbe ebipụtara nwere a dị nnọọ nro ederede dị ka ihe seramiikiNa mgbakwunye, mgbe sanding ya, anyị na-eme ka elu ya dị nro ma hichapụ ahịrị ndị sitere na mkpebi nke ọ bụla, na foto na-esote ị ga-ahụ na anyị sanded ebe a kapịrị ọnụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ ka i wee nwee ike ịhụ ọdịiche ahụ.
Agbanyeghị, anyị enweela nsogbu mgbe anyị ji akwụkwọ a na-ebi akwụkwọ yana ọ na-esiri anyị ike ijigide ụda filament oge niile nwere ike ịbụ n'ihi adịghị mma nke ụyọkọ akụrụngwa nke gụnyere ngwa Anet A2 Plus nke anyị ji. Ihe doro anya bụ na Ga-ebu ụzọ mee nnwale ole na ole site na onye na-ebupụta ngwa ngwa nke onye nbipute gị iji mezuo mgbe niile. Ihe ọzọ dị mkpa bụ na filament cools nnọọ nwayọọ nwayọọ ya mere ọ dị mkpa iji agba oyi akwa mgbe niile.
Mmechi na 3D Smart ihe Filaments
Samplestụle ihe ntanetị dị obere nke filaments nwere njirimara dị iche iche na-esiri ike mgbe niile, n'ihi na ị ga-atụle na ọ bụrụ na akụkụ ahụ agahie, ị nweghị nnukwu ihe ị ga-ebipụta ọzọ.
Ọ bụ ya mere anyị ji ahọrọ mpempe akwụkwọ 2 dị mfe iji bipụta ma anyị bipụtara ha n'otu ụzọ na nhazi na ihe niile. Ọ bụ ezie na n’uzo dị otu a ị nweghị ike ịhụ ihe ọ bụla n’ịma mma ya, ọ na-enyere gị aka ịmatakwu ihe anyị nwere ike ịtụ anya n’aka nke ọ bụla n’ime ha.
Ọ na-eju anyị anya na anyị zigara ọtụtụ, ihe ọ bụla dị iche iche ma nwee ihe pụrụ iche nke na-eme ka ha bụrụ nhọrọ na-atọ ụtọ.
Nke a nwa ite ebipụta ya na Smartfil Glase laminated na iko iko ma mee ka mmanya na-atọ ụtọ ga-abụ ọmarịcha. Ihe a kpụrụ akpụ Edere ya na Smartifil EP ma mechaa sanded, o doro anya na ọ ga-abụ onyinye magburu onwe ya maka Daybọchị Ndị Ọzọ na-esote. A ikpe smartfil Boun ga-echebe iphone anyị site na anụ ndị dara oke ... ohere ọ ga - abụ na - adịghị agwụ agwụ na Ihe Akụrụngwa 3D na-enye anyị ihe iji mee ka ha mezuo ezigbo filaments.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Anyị na-enyocha ihe ndị kachasị mma nke ihe Smart 3D
Ọ ga-amasị m ịmara banyere filament nke na-eduzi ọkụ eletrik iji mee mpempe akwụkwọ 3 D wee were ya gaa tankị electrolytic, kedu nke ị kwadoro?
China gosiputara anyi egbe ala laser nke nwere ike igba ala drones
CPWC, teknụzụ ga - enye gị ohere ibipụta na 3D na oke ọsọ